XUDUUDAHA COLLIE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Xuduudaha Collie Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Koda Xudduudda iyo caddaanka Xudduudda Collie oo siisa bawadeeda
Sheepdog Iskotish ah
Xudduudka Collie waa eey dhexdhexaad ah oo firfircoon. Jidhkiisu waxyar buu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Qalfoofka hoose ee fidsan ayaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Qalfoofka iyo xamarku waa dherer isku mid ah, oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Ilkaha adag waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha ovalda ah si fiican ayaa loo kala saaray oo midabkoodu midabkiisu yahay bunni, marka laga reebo meerisyada ay labada indhood midkood ama buluug noqon karaan. Dhegaha dhexdhexaadka ah ayaa si fiican loo kala saaray, ha ahaadeen kuwo kacsan ama kacsan. Lugaha hore way toosan yihiin marka xagga hore laga eego, laakiin xoogaa hoos u foorara marka laga eego dhinaca. Dabada dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ayaa hoos u dhacday ugu yaraan ilaa hock, kor u kacaysa xoogaa yar markii eygu faraxsan yahay. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Dharka laba-geesoodka ah waa mid u adkaysta cimilada, cufan oo isku dhow. Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah: jaakad gaaban, qafiif ah (qiyaastii 1 inji (2.5 cm) dheer) iyo jaakad qalafsan, jaakad ah (qiyaastii 3 inji (7.6 cm) dheer). Midabada jaakadu waxay ku yimaadaan madow iyo caddaan, midable, casaan iyo caddaan, madow iyo cawl, jaalle, jaalle iyo caddaan, sable, iyo dhammaan madow. Noocyada timo dhaadheer ee dhaadheer waa inay lahaadaan manjo iyo buraash dabada ah. Timaha wejiga, dhagaha iyo lugaha hore ayaa had iyo jeer gaagaaban oo jilicsan. Maaddaama Kulliyadaha Xudduudda loo soocay karti shaqo iyo sirdoon halkii ay ka ahaan lahayd quruxda jirka, isweydaarsigu aad buu u kala duwan yahay.
Xudduuda Collie waa mid caqli badan oo ka warqaba hareeraheeda. Waxay awood u leedahay in lagu tababaro heer sare. Kani waa mid ka mid ah eeyaha ugu shaqada badan ee ku faani kara amaanta. Kulliyadaha Xudduudda waxaa matalaya hoggaamiyeyaasha heerarka tartamada ee isboortiga kala duwan, oo ku fiican xirfadaha deg degga, u hoggaansamida, tijaabooyinka idaha iyo Frisbee ™. Tartamadaan ayaa toos u ah luuqdooda, waana loo isticmaalaa inta badana waa lagu guuleystaa. Kuwa doonaya inay heerar sare ka gaaraan isboortiga eyga, Xudduudda Collie waa hadiyad xagga samada ka timid. Beeraleyda sidoo kale way ku faraxsan yihiin iyaga, maadaama asal ahaan loo abuuri jiray inay yihiin dad beeraley ah. Xudduudka Collie waa mid firfircoon oo awood badan leh. Haddii ay helaan firfircooni ku filan oo ay mashquul ku ahaadaan iyo jimicsi ku filan , Xudduudka Collie ayaa si farxad leh ula wadaagi doona eeyaha iyo carruurta kale, si kastaba ha noqotee waxay noqon karaan kuwo dagaal badan eyda kale ee isku jinsiga ah haddii aadan iyaga la tusin hoggaamiye 100% ah. Waa inaan lagu aaminin xayawaanka yaryar ee aan xayawaanka ahayn , si kastaba ha noqotee waxaa jira ururo fara badan oo Xudduud ah oo ku nool lana nool bisadaha qoyska. Noocani wuxuu noqon karaa mid xasaasi ah waana inuu noqdaa aad u wanaagsan bulshada sida eey si looga hortago xishoodka. Si ay runtii u farxaan, waxay u baahan yihiin hoggaan badan oo isdaba joog ah, jimicsi ballaaran oo maalinle ah, iyo shaqo ay ku mashquuliyaan maskaxdooda. Kulliyadaha Xuduudaha ayaa inta badan la tartami doona awoodda mulkiilayaashooda marka ay qaan-gaaraan. Heerarka xukunku aad ayey u kala duwan yihiin, xitaa isla qashin isku mid ah. Waxaad ubaahantahay inaad noqoto mid eeygan adag, kalsooni leh, hogaamiye xirmo isdaba joog ah, ama wuu isku dayi karaa oo la wareego . Haddii aad u oggolaato inuu la wareego, iyada oo aan la helin bulsho ku filan iyo jimicsi maskaxeed iyo mid jireed, wuxuu noqon karaa mid aad u firfircoon oo xasaasi u ah, isaga oo ka dhigaya xulasho liidata qoysaska carruurta yaryar leh. Xudduudka Collie waa qof dhammaystiran oo leh rabitaan joogto ah oo uu ku farxo. Noocani wuxuu u nool yahay inuu kuugu adeego maalin iyo maalinba. Maahan xayawaan ku habboon dadka aan qorsheyneynin inay waqti badan la qaataan. Eeyahaani waa kuwo aad u caqli badan oo aan maalintii oo dhan guriga jiifsan iyagoo aan shaqo hayn. Haddii aadan diyaar u ahayn inaad geliso saacado badan maalintii si aad u ilaaliso eeyahaas si wanaagsan u jimicsiga maskaxda iyo jirka labadaba, markaa waxaa lagugula talinayaa inaadan qaadan Xadka Collie. Waxaa jira noocyo kale oo la mid ah laakiin aan u baahnayn sida kuwa Shetland Sheepdog ama Adhijirka Ustaraaliya , oo labaduba si heer sare ah loo tababaran karo, wali waxay u baahan yihiin kicin iyo jimicsi, laakiin badanaa waxay ku baxsadaan wax ka yar Xadka Collie. Haddii aysan jirin waxqabad ku filan markaa Xudduudka Collie wuxuu helayaa shaqo u gaar ah oo uu qabto, taasna ma noqon karto waxa aad maskaxda ku haysay markii aan nidhaahno erayga SHAQO. Markaan maalin walba la horkeenin way noqon karaan waana noqon doonaan wax duminaya . Kaligood looma dhaafi karo muddo dheer wax ay qabanayaan haddii aan jimicsi la sameynin illaa heer ay maskax ahaan iyo jir ahaanba daalan yihiin. Xudduudka caajiska ah ee Collie ma sameyn doono xayawaan wanaagsan, maxaa yeelay waxay noqon kartaa neurotic waxaana laga yaabaa inay bilawdo isticmaalka farshaxankeeda farshaxanka, iyo kuwo kale dhibaatooyinka dhaqanka . Waxay leeyihiin dareen xoolaad oo xoog leh waxayna isku dayi karaan inay daaqaan carruurta iyo shisheeyaha waana in loo sheegaa inaysan taasi ahayn wax la aqbali karo.
Dhererka: Ragga 19 - 22 inji (48 - 56 cm) Dumarka 18 - 21 inji (46 - 53 cm)
Miisaanka: Ragga 30 - 45 rodol (14 - 20 kg) Dumarka 27 - 42 rodol (12 - 19 kg)
U nuglaanta suuxdinta, dysplasia sinta, PRA (Collie Eye Anomaly) iyo dhago la'aan. Badanaa xasaasiyad ku leh boodada. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 kaasoo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
Xudduudka Collie laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha waxayna ku fiicnaadaan acreage. Noocani wuxuu ku fiicnaan doonaa qolka xayawaanka haddii ay hawl maalmeed leedahay oo ay aragto in badan oo ka mid ah cidda maamusha. Noocani kuma haboona nolol ku xidhan silsiladaha dayrka maalintii oo dhan.
Jimicsiga jirka kaliya kuma filna eeygan caqliga badan ee firfircoonida badan. Waxay rabaan inay shaqeeyaan waana inay ku sameeyaan sidaas jir iyo maskax mid mid, iyagoo fulinaya hawlo kala duwan. Si dhakhso leh oo dhaqso badan, eeyahaani yar yar ee firfircoon waxay leeyihiin tamar aan xad lahayn oo waxay ku baraaraan shaqo adag iyo ciyaar. Sidoo kale waa in lagu qaataa a socod dheer oo maalin kasta socda . Waxay ku faraxsan yihiin inay arkaan qulqulaya kubbadda ka dib ama adhigii baadiyeynaya ay dib ugu celinayaan xayndaabka.
4 - 8 eeyo, isku celcelis 6
Xudduudka Collie wuxuu u baahan yahay shanleyn joogto ah iyo cadayasho si uu u ilaaliyo jaakaddu. Daryeel dheeri ah ayaa loo baahan yahay marka dharka jilicsan, ee cufan uu daadanayo. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Hubi dhegaha iyo jaakad joogto ah shilinta. Noocani waa celcelis daadiya.
Xudduudka Collie waxaa markii hore loogu yeeri jiray 'Eyga' '' '' '' '' Scotch Sheep Dog '' wuxuuna asal ahaan ka soo jeeday Northumberland oo ku teedsan xuduudaha Scotland iyo England. Waa farac ka soo jeeda eeyaha ay Vikings u adeegsadaan dib-u-daaqsinta, noocyadii hore ee ingiriiska quusin jiray, oo lagu daray isbaanishka. Waxaa loogu magac daray 'shaqa-wade' dartiis iyo jacaylkiisa shaqo, Xudduudka Collie wuxuu leeyahay il indha-sarcaya lo'da. Waxay hanan kartaa nooc kasta oo lo 'ah markay foorarsato oo ay ku mashquusho xayawaanka iyada oo aad u eegaysa. Mid ka mid ah noocyada ugu tababbarka badan, Xudduudda Collie sidoo kale waxay u adeegtaa sida daroogada iyo eeyga baarista bamka waana howl-wadeen sare oo soo noqnoqda oo u hoggaansan, ad-adayg, Frisbee ™ tijaabooyin, shaqada booliiska, goobidda iyo samatabbixinta, Flyball, sameynta tabaha iyo u hoggaansanka tartanka. Qaar ka mid ah Kulliyadaha Xuduudaha ayaa loo tababaray si guul leh iyaga oo hagaya eeyaha indhoolayaasha. Xilligan natiijooyin aad u wanaagsan ayaa laga helaa iyaga oo loogu talagalay caawimaad guud oo loogu talagalay dadka naafada ah ee Nederland. Xudduudka Collie waxaa markii ugu horreysay aqoonsaday xisbiga AKC 1995.
madow n cad weyn dane
ABC = Ururka Xuduudaha ee Collie
AIBC = American Int. Diiwaanka Xudduudaha Collie
'Tani waa Franny Rose, haweeneyda diiwaangashan Xudduudka Collie ee jira 10 bilood. Midabkeedu waa merle mer mer tri. '
'Franny waa eey cajiib ah runna u ah heerarka Xudduudka Collie. Waxay leedahay il adag, isboorti badan, iyo dareen xoolaad. Franny sidoo kale waa mid laga cabsado dadka, dadka waaweyn iyo carruurta isku mid. Iminka waa 11 bilood miisaankeeduna waa qiyaastii 25-30lbs. Waxay noqon doontaa rajo cabsi leh, taas oo ah wax aan rajeynayo sanadka soo socda!
Sandra ah indho bulug ah Xudduudka Collie ee 15 bilood jira— Waxaan haystay Sandra illaa iyo markii ay ahayd 8 toddobaad. In kasta oo aan u arko nafsad ahaanteyda mid aad u adag iyada laakiin waxaan leenahay wax weyn xiriir dheellitiran . Aniga oo reerka ku dhexlahaa Xudduuda Xuduudaha mar hore, weligey kuma aanan yeelan wax kaligey ah oo waliba kaligey baan noolahay, sidaa darteed waan ogaa waxa hortayda yaal. Laga soo bilaabo yaraantaydii waxaan bilaabay inaan ku kaxaysto safarada baabuurta taas oo noo suurta galinaysa inaan wada qaadano waqti badan inta suurtogalka ah. Waxaan u huray qayb badan oo noloshayda iyada ah iyo isagaba. Noocani waa farxad sida haddii aad leedahay nolol firfircoon oo ay qayb uga noqon karaan si uun. Waxaan u maleynayaa inaan ugu dambeyntii helay saxnaanta. Gabi ahaanba way ixtiraamtaa aniga oo ah sayidkeeda tanina waa iska cad Waxaan gabi ahaanba u ixtiraamayaa inay tahay 'amiiradeyda' inkasta oo aanan waligey u sheegi doonin, iyadu waa haweeney feisty ah! Indhaheeda buluugga ah ayaa ah kuwa hadalka iyo xasadka dad badan. Labadaba runtii waan wada barakaysan nahay. '
Ku buuxi Seddex-midab Xadka Collie da'da 3 sano jir— 'Gill waxaa laga helay aag ku yaal Kerry, Ireland oo la yiraahdo Castlegregory. Noocan Collie wuxuu gaar u ahaa aagga sannado badan hadda, badanaa maqalka idaha buuraha. Weligay weligay ma yeelan Collie hadda kahor. Gabi ahaanba waan xirnahay. Waa eey qurux badan. Soo celinta kaliya ayaa ah inuu ku mashquulsan yahay inuu maqlo fardo leh heerar kala duwan oo guul leh iyo xoogaa laadyo ah.
Ka bood cabsi badan oo ka yimid Koda the Border Collie, oo lagu muujiyey halkaan isagoo jira 1 sano iyo bar
Boqor Charles Malta iyo cavalier qas spaniel
Nouba the Border Collie oo 11 bilood jir ah kana yimid Brazil
Nouba the Border Collie oo 6 bilood jir ah kana yimid Brazil
Jade waa Caslie iyo cadaan Collie
Brin, oo ah 1 old-sano jir jir sitalo saddexlaab leh oo Seddex geesood leh Collie
Daisy Mae the Horder Border Collie
'Cobain waa diiwaangelin xuduudeed nadiif ah Collie. Isagu waa jaalle iyo caddaan (sidoo kale loo yaqaan 'Australian Red') oo loo arko midab aan caadi ahayn oo loo yaqaan 'breed', laakiin sinaba 'uma badna'. Waxaa la qaataa ugu yaraan 2 saacadood oo socod ah maalin kasta iyo sidoo kale wareegyo badan oo la soo qaado. Waxaan sidoo kale bilownay inaan sameyno firfircooni waana uu sifiican ugu guuleystaa. Isagu waa eey layaab leh qoyskeyga dhinac walba. Waxaan ka shakisanahay inaan waligey yeelan doono nooc kale.
Eeg tusaalooyin badan oo Xudduuda Collie ah
Xuduudaha Collie Sawirada 1
Xuduudaha Collie Sawirada 2
Xuduudaha Collie Sawirada 3
Xuduudaha Collie Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
badh yey badh alaskan malaamute
images of eey Eskimo Maraykanka
guduud casaan Charles boqorkii cavalier spaniel
beerka iyo cadaan ingiriis cocker spaniel